Atom 1.0 azo sintonina | Avy amin'ny Linux
Efa elaela aho no nampiasaina hiasana Ny tendrony aloha tonian-dahatsoratry ny lahatsoratra roa malaza, tiako horesahina Lahatsoratra anio y fononteny mahitsy, ity farany ity no ampiasako amin'ny alàlan'ny default.
Tamin'izany fotoana izany dia nanandrana ny kinova taloha izy Atom ary tsy naharesy lahatra ahy mihitsy izy. Somary niadana ihany izy io, tsy nahomby ny famitana ny kaody automatique ary tsy nanana safidy maro izy, na izany aza, miaraka amin'ny kinova 1.0, azo roa andro lasa izay, niova be ny tontolo.
1 Inona no entin'i Atom antsika?
2 Fanamboarana Atom amin'ny fomba feno
3 Mametraka Atom
Inona no entin'i Atom antsika?
Araka ny efa nolazaiko, ny iray amin'ireo zavatra nanelingelina ahy indrindra momba ny kinovan'ny Atom teo aloha dia ny famitana ny kaody farany mampalahelo sy decadent, saingy nihatsara be ity kinova ity autocomplete-plus, izay napetraka ho fonosana.
Misy fonosana hafa izay mahatonga an'i Atom ho mpanonta mahery vaika go-plus, hanatsarana ny fiteny noforonin'i Google, atomo-karazana ho fanohanana feno ny TypeScritp, ny fiteny fandaharana maimaimpoana an'i Microsoft ary omnisharp-atom, ho an'ny C # sy .Net.
Fanamboarana Atom amin'ny fomba feno
Ao amin'ny safidin'ny Atom dia mahita safidy maro isika hanamboarana azy mifanaraka amin'ny tsiro sy ny filantsika, ary manana mihoatra ny Lohahevitra 600 (aka hoditra) hisafidianana, ary mihoatra ny 2000 fonosana hanitatra ny fampiasa ao aminy.
Ao amin'ny Atom 1.0 betsaka ny zavatra milay hafa nampiana toy ny «browser» fisie, fikarohana haingana ary mpahita Mahita fuzzy, takelaka maromaro sy kintana mifantina, sombintsombiny, fanohanan'ny Markdown, ary maro hafa ..
Ny zavatra tsy mampino momba izany rehetra izany dia ny fanatsarana ny fampiharana no nihatsara be, ary koa ny valiny rehefa nanoratra lahatsoratra.
fononteny mahitsy mbola ho ahy safidy tsara kokoa ho an'ny asa amin'ny FrontEnd. Amin'ny alàlan'ny alàlan'ny default anao fotsiny ny safidy hijerena ireo loko rehefa apetrakao amin'ny kôstô CSS ny kôkôra, na sary iray rehefa apetraka eo an-dàlana ny kursor, dia manamora kokoa ny asa.
Na izany aza, hiezaka Atom aho ary mety hahita fampiasa betsaka kokoa amin'ny fampiasana azy.
Raha mampiasa ArchLinux isika dia afaka mametraka Atom avy amin'ny AUR:
Raha mampiasa fizarana .deb na .rpm isika dia afaka misintona mivantana ireo binary avy amin'ny tranokala Atom. Mazava ho azy fa 64 bitika no nanangonana azy ireo.
Ampidino ny Atom
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Atom 1.0 azo alaina
Misaotra ny fampahalalana hojereko atoma hahitako hoe nanao ahoana izy, satria hanomboka fampianarana aho ary hametraka kaody studio hojerena ary hahitako hoe iza no ahazoako aina.
Mamaly an'i xRnsxe
Heveriko fa miaraka amin'i Atom ianao dia hanao tsaratsara kokoa .. fa tsy haiko, tokony hanandrana ianao 😀
Hektor dia hoy izy:
Salama, efa ela koa aho no nampiasa azy io ary tiako be ilay izy, saingy nisy lesoka io (raha ny fahitako azy) ary ny tsy namonjeny ny sehatr'asa na ny antontan-taratasy misokatra, fantatrao ve raha niova izany?
Valiny tamin'i Hektor
Toa izy ireo no nanamboatra azy io ...
Misaotra, andramako indray 🙂
Misaotra an'i Elav amin'ny tendron'ny tendrony dia milaza aminao aho fa Atom dia ampiasaiko matetika kokoa noho ny soratra Sublime tsy mampino. Ny fononteny tsy nomeko fotoana firy, manana hevitra aho fa mavesatra izany, ary nihatsara be i Atom tamin'izany.
Mahatsiaro ho miadana ny fononteny indraindray, indrindra rehefa apetrakao aminy ny fanitarana sasany, saingy tsy mavesatra izany .. azo antoka fa mihazakazaka haingana kokoa ny Atom sy Sublime, angamba satria miorina amin'ny haitao web ny Brackets.
Bono dia hoy izy:
Atom dia miorina amin'ny electron (https://github.com/atom/electron) izay araka ny fahazoako azy ny teknolojia web web. mahafaly
Eny, tsy azoko hoe ahoana ny fomba miadana be hanokatra na misy olana ny fanidiana ary tsy Atom 🙁
Na dia tonian-dahatsoratra misy fiteny maro aza ity, ho an'ny GO, mampiasa LiteIDE + Godoc aho. Fanovana kaody GO miaraka amin'ny famenoana autocomplete. Ho an'ny Go ihany (na Golang ho an'ny karoka).
Maivana ary ho an'ny Linux, Windows ary BSD.
Mazava ho azy fa miaraka amin'ny fanangonana, fanafoanana, fanatanterahana, sns.
Izy io dia tsy manana famolavolana interface interface, na dia samy manana tranomboky tranokala sy tranonkala aza ianao.
Tsara raha namela rohy na baiko ho anay distro hafa an'ny GNU / Linux ianao izay tsy Arch Linux ihany, sa tsy izany? tsara toa ity mpampanonta lahatsoratra ity. misaotra
Ao amin'ny tranonkala iray ihany https://atom.io/ jereo izay manazava ny fomba fametrahana azy ireo amin'ny sehatra hafa 😉
Marina izany, ao amin'ny rohy farany amin'ny paositra ihany koa dia misy ny binary rehetra misy.
Ao amin'ny Gentoo sy ny derivatives dia apetraka amin'ny overlay-ko 😀 https://github.com/jorgicio/jorgicio-gentoo
Manantena aho fa tianao ny fiteny GO, fivoarana kely avy amin'ny C, fa tsy c ++.
Ah, tsy godoc io fa code gocode. Fahadisoako.
Miala tsiny fa editor izy fa tsy fiteny.
Gonzalo ruiz dia hoy izy:
Tsaroako fa nametraka ny Atom aho nefa nihinana loharano be dia be, elaela vao niasa, raha nisy nanandrana dia lazao ny zavatra niainana.
Valiny tamin'i Gonzalo Ruiz
Nametraka azy aho omaly ... Te-hivoaka elaela ny kinova farany hahafahako manolo ny Sublime Text 2 indray mandeha ... Nanao ny fanovana aho omaly, nametraka plugins vitsivitsy toa ny Build and Highlight-line aho ary faly aho :)
Nanandrana ny Atom aho ary nahita ny fampitahana an'io sy ny Sublime Text. Ny marina, tsy hitako ny antony fanjifana kapila mafy, na dia haingana be aza izy io. Ny Sublime Text dia tsy mandany mihoatra ny 20 MB. Ankoatr'izay, tsy nahita zavatra à la Arduino ho an'ny Atom aho (ho an'ny Sublime Text, misy an'i Stino, hanangonana programa ho an'ny Arduino ary hampiasa azy io ho IDE). Ka amin'izao dia mandalo aho. Fa ankasitrahana.
Ity misy .deb nataoko ho an'ny i386:
ho an'ny ekipa misy arq ... 86 ?? mahafaly
Bru dia hoy izy:
Ho an'ny solosaina 32-bit ...
Valiny tamin'i Bru
Angamba ny fanontaniana hapetrako aminao dia toa hafahafa, fa fantatrao ve raha misy mpamoaka lahatsoratra afaka alamina amin'ny fomba mamela ny sisiny ankavia alohan'ny hanoratana?
Misaotra mialoha. Notadiaviko io fa tsy hitako.
Mifikitra hatrany amin'ny Brakets aho, araka ny filazan'i Elav, fa ny fahitana ireo loko ao amin'ny CSS ary koa ireo sary dia mahavonjy ahy be dia be, asa be.
misy manana ny rpm ho an'ny i386?
azonao atao ve ny mamela ahy rohy dia ho feno fankasitrahana aho
Ny loko dia hita amin'ny alàlan'ny fametrahana loko.